Ny fanjakana hafakely any Nepal , izay manintona ny mpizahatany maniry ny hankasitraka ny natiora toy ny hoe mamanay, ary avy any amin'ny taona 1768, ireo mpihanika, izay mikasa ny handresy ny tendron'ny ranomandry. Na izany aza, ity firenena kely any Azia Atsimo ity dia manokatra ny varavarany ho an'ny mpandeha raha tsy tamin'ny 1991. Tempoly sy monasitera maro be ny hatsaran-tarehy dia nanjary natao ho an'ny besinimaro.
Indrisy anefa, tamin'ny lohataonan'ny 2015, nisy horohoron-tany nandravarava, izay nahatonga ny fandringanana ny ankamaroan'ny toerana misy ny fanjakana. Na dia eo aza ny fandehanan'izy ireo manerana ny firenena dia mahafinaritra sy mahatsiaro tsy hay hadinoina ireo mpizaha tany, satria tsy maninona na dia eo amin'ny lisitr'ireo toerana 50 mendrika aza i Nepal.
Inona no hitranga any Nepal?
Eritrereto ireo mpitsidika malaza indrindra any Nepal taorian'ny loza, manolotra ny sariny sy ny famaritana fohy:
Mount Everest. Ny tanjona lehibe indrindra amin'ny firenena dia heverina ho tendrombohitra . Ao amin'ny faritanin'i Nepal dia misy tampony 8 avo indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny karatra fandraharahan'ny firenena dia ny tampon'ny tendrombohitra ao Jomolungma (Everest), izay mitsidika mpihanika an-tanety maro manerana izao tontolo izao.
Ny toerana misy ny tendrombohitr'i Kanchenjunga , eo amin'ny sisin-tanin'i Nepal sy Inde, dia misy tampony 5. Ny fiakarana mankany amin'io tendrombohitra io dia tena sarotra sy mampidi-doza, fa ireo mpitaingina tendrombohitra ihany no afaka. Ny voalohany dia ny "mandray" ny tampon'Ingahy Kanchenjunga dia nahomby tamin'ireo mpikambana tao amin'ny British British expedition tamin'ny taona 1955.
Ny Valley Kathmandu dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra any Nepal. Eto dia misy tranobe lehibe indostrialy Boddista sy Hindu, sy tranombakoka maherin'ny 100 avy amin'ny archéologique, ara-tantara ary an'olombelona, ​​ary ny sasany amin'izy ireo dia niverina tamin'ny taonjato voalohany. ny vanim-potoana misy antsika.
Ny tempolin'i Krishna any Bhaktapur no karatra fitsangatsanganana ao an-tanàna. Mahagaga ihany koa ny lakolosy sy ny tempolin'i Taledzhu andriamanibavy, ny kianja Taumadhi Tole sy ny Lapan'ny Mpanjaka.
Ilay lakandranon'i Lake Pheva , malaza amin'ny fijery manintona eo amin'ny Himalaya. Ity Pokhara manan-tantara ity dia io no tanàna lehibe fahatelo indrindra ao amin'ny firenena, manomboka amin'ny toerana an-jatony mpizahatany an-tendrombohitra, anisan'izany ireo mpandeha an-tongotra. Any afovoan-dranomasina dia misy nosy kely misy ny tempolin'i Bahari, ary ao amin'ny rano madio ao Pheva amin'ny toetr'andro mazava dia hita taratra ny tendrony amin'ny tendro-tendrombohitra any Annapurna .
Ny Valan-javaboarin'i Chitwan dia iray amin'ireo fanatanjahantena malaza indrindra any Nepal, izay niaro ny fanjakana hatramin'ny 1973. Eto amin'ny toerana voajanahary voajanahary, afaka mahita biby dia ianao, manao fampisehoana mahafinaritra amin'ny elefanta.
Sagarmatha National Park - maherin'ny 1000 metatra toradroa. km of protected area. Eto no misy ny fihaonan'ny tendrombohitra Everest. Ao Sagarmath ihany koa dia afaka mitsidika tranonkala ara-pivavahana marobe ianao, izay tena manan-danja ny tempolin'i Tengboche .
Pashupatinath dia orinasa goavam-be Hindu any atsinanan'ny renivohitra, ary toerana iray misy ny yogis nomady. Mamitsaka ao anaty zohy manodidina ny tempoly ny fofon'aina. Avy any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny renirano, ireo mpizahatany dia afaka mijery fombafomba fandevenana ao amin'ny tokotanin'ny tempoly lehibe.
Ny monasiterin'i Kopan , izay naorina tamin'ny 1969, dia any amin'ny manodidina an'i Kathmandu. Nahazo laza maneran-tany izy tamin'ny alalan'ny fandaharam-pahaizana momba ny fisaintsainana, izay notarihin'ny tompon'andraikitra araka ny fampianaran'i Lamrim.
Cave Mehendra , antsoin'ny mponina hoe "trano ramanavy" noho ny antony mahatonga azy ireo ho tranon'olona marobe. Ireo mpizahatany eto dia mahita vaksiny maro, ka ny ankamaroany dia namadika ny sarin'ny Hindu andriamanitra Hindoa.
Tetezana roa avy any Amerika
Ahoana no fampitana ny kambana?
Misotro bisy ho an'ny bitro
Lakozia miaraka amin'ny nosy
Visa ho an'i Qatar ho an'ny Rosiana
Andrew Garfield dia niresaka momba ny fironany ara-pananahana
Ny fitsaboana amin'ny volo amin'ny salon
Nystatin miaraka amin'ny tongotra
10 fomba tsy ampoizina sy mahomby amin'ny fampiasana vinaingitra
Eva Mendes dia namoaka ny fanangonana faharoa amin'ny akanjo
Kaitlin Jenner hiverina hiady amin'ny homamiadan'ny hoditra
Ahoana ny fananganana ny rambony mandritra ny herinandro?